ဖိလစ်ပိုင်မှာ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ကမ်မူရီကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၇ ဦးထိမြင့်တက် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း ဖိလစ်ပိုင်မှာ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ကမ်မူရီကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၇ ဦးထိမြင့်တက်
A resident walks past debris from their destroyed houses after Typhoon Kammuri hit the city of Sorsogon, south of of Manila on December 3, 2019. - Typhoon Kammuri killed at least two people in the Philippines on December3as it tore roofs off houses and forced the international airport in Manila to shut down. (Photo by RAZVALE SAYAT / AFP)
ဖိလစ်ပိုင်မှာ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ကမ်မူရီကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၇ ဦးထိမြင့်တက်
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ အင်အားပြင်းမုန်တိုင်း ကမ်မူရီကြောင် သေဆုံးသူ ၁၇ ဦးထိ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
မုန်တိုင်းကြောင့် လူနေအိမ်တွေ ပျက်စီးကာ လူသိန်းချီ နေအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်မိုးလေဝသ ဗျူရိုရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ တိုင်ဖွန်း မုန်တိုင်း ကမ်မူရီဟာ အင်အားနည်း အပူပိုင်း မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ လူဇွန်ကျွန်းရဲ့ တောင်ဘက်အစွန်က ဘီကိုးလ် ဒေသမှာ လူ ငါးဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ကျွန်းရဲ့ တခြားဒေသမှာ လူ ၁၁ ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်း ဘေးအန္တရာယ်ထိန်းချုပ်ရေး အေဂျင်စီတွေက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မုနတြိုငြးကှောင့ြ စိုကခြငြးကပကွစြီးမှုတနဖြိုးဟာ အနညြးဆုံး ဖိလဈပိုငြ ပီဆို သနြး ၈၀၀ (အမရေိကနဒြေါလြာ ၁၅.၇ သနြး) ရှိပါတယြ။ ပှညနြယကြူးလမြးမကှီး ၁၂ ခုနဲ့ တံတားသုံးစငြးကို ပိတထြားရပှီး လူပေါငြး ငါးသိနြးကွောြ ရှေ့ပှောငြးခဲ့ရပါတယြ။ တိုငဖြှနြးမုနတြိုငြး ကမမြူရီဟာ ၂၀၁၉ ခုနှဈအတှငြး ဖိလဈပိုငနြိုငငြံကို ဝငရြောကတြဲ့ အငအြားပှငြးမုနတြိုငြး အခု ၂၀ မှောကဖြှဈပါတယြ။ နှဈစဉြ ဖိလဈပိုငနြိုငငြံကို ဆိုကကြလုနြး မုနတြိုငြးပေါငြး ၂၀ ခန့ြ ဝငရြောကလြေ့ရှိပှီး ၂၀၁၃ ခုနှဈက ဝငရြောကခြဲ့တဲ့ တိုငဖြှနြး မုနတြိုငြး ဟိုငယြနြ ကှောင့ြ လူပေါငြး ၆၃၀၀ ကွောသြဆေုံးခဲ့ပါတယြ။
ဖိလဈပိုငျမှာ တိုငျဖှနျးမုနျတိုငျး ကမျမူရီကွောငျ့ သဆေုံးသူ ၁၇ ဦးထိမွငျ့တကျ
မုန်တိုင်းကြောင့် စိုက်ခင်းကပျက်စီးမှုတန်ဖိုးဟာ အနည်းဆုံး ဖိလစ်ပိုင် ပီဆို သန်း ၈၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅.၇ သန်း) ရှိပါတယ်။ ပြည်နယ်ကူးလမ်းမကြီး ၁၂ ခုနဲ့ တံတားသုံးစင်းကို ပိတ်ထားရပြီး လူပေါင်း ငါးသိန်းကျော် ရွေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ကမ်မူရီဟာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ဝင်ရောက်တဲ့ အင်အားပြင်းမုန်တိုင်း အခု ၂၀ မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်စဉ် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကို ဆိုက်ကလုန်း မုန်တိုင်းပေါင်း ၂၀ ခန့် ဝင်ရောက်လေ့ရှိပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ တိုင်ဖွန်း မုန်တိုင်း ဟိုင်ယန် ကြောင့် လူပေါင်း ၆၃၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
Previous articleအနည်းဆုံးလုပ်ခလစာ သတ်မှတ်ခြင်းကို နောက်မကျအောင်ဆောင်ရွက်မယ်
Next articleမန္တလေးရှိ အောင်ပြည့်ဝဖြိုးကုမ္ပဏီက အလုပ်သမားသုံးဆယ်ကျော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်